वर्षायाममा फंगल संक्रमणबाट जोगिन के गर्ने ? - Health Today Nepal
वर्षायाममा फंगल संक्रमणबाट जोगिन के गर्ने ?
July 25th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
काठमाडौ,साउनः बर्खायाममा सबैभन्दा बढी हानि हाम्रो छाला र खुट्टालाई हुने गर्छ । यो मौसममा हामीले अनुहारको स्याहार गर्न समय खर्चे पनि खुट्टाको स्याहारमा खासै ध्यान दिँदैनौं । हिलो, आद्रता,पानी आदिले गर्दा खुट्टाको छालालाई धेरै नोक्सानी हुन्छ । पानीले भिजेका जुत्ता, चप्पल लगाउदा खुट्टामा दाद, चिलाउने, डाबर जस्ता समस्या हुने गर्छन् ।
खुट्टाको हाइजिन कायम राख्न यो मौसममा हामीले विशेष ध्यान राख्नुपर्छ । धेरै बढी आर्द्रता र पसिनाले गर्दा बर्खायाममा खुट्टामा संक्रमण हुने गरेको छ । यसैले दिनहुँ खुट्टा धुने–पखाल्ने गर्नुपर्छ । यसले गर्दा पसिनासँगै निस्किने फोहोर तरल पदार्थ छालाबाट निस्किन्छ र खुट्टा दुर्गन्धित हुनबाट जोगिन्छ । थप संक्रमणको अवस्था आउन पाउँदैन । नुहाउँदा जीउ मात्र नभए खुट्टालाई समेत राम्ररी सफा गर्नुपर्छ । खुट्टा धोएपछि पुछेर औँलाबीच टल्कम पाउडर छर्दा फाइदा हुन सक्छ ।
यो मौसममा जुत्ता लगाउनेहरूले भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जुत्ता सम्भव भएसम्म दिनहुँ घाममा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा जुत्ताभित्र ढुसी उत्पन्न हुन पाउँदैन । जुत्ताभित्र टल्कम पाउउडर छरेरसमेत सुक्खा राख्न सघाउन सकिन्छ । बर्खामा खुल्ला चप्पल लगाउनु नै राम्रो मानिन्छ । यसले गर्दा खुट्टामा हावा लाग्नुका साथै तपाईंको पसिना सुक्नसमेत सहज हुन्छ । खुट्टाका नङलाई नियमित रूपमा सफा गर्नुपर्छ, काटिरहनुपर्छ । यसले फोहोर र ब्याक्टेरिया जम्मा हुन पाउँदैन । खुट्टामा दाद, चिलाउने, फंगस आदिको समस्या देखिए छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाहमा उपचार गर्नुपर्छ ।
Previous article स्वस्थ यौनका लागि सन्तुलित खानपान
Next article खाद्य तथा गुण नियन्त्रणको महानिर्देशकमा डा. मतीना